Umaka: bi | Martech Zone
Umsebenzi: Qoqa, uguqule, futhi idatha Yokumaketha Okuphakelayo
NgoLwesine, July 23, 2020 ULwesihlanu, May 21, 2021 Douglas Karr
Njengoba amathuluzi amaningi ngokwengeziwe ekuthengiseni nasekumaketheni kwakho, ukukhiqiza imibiko eyodwa kungaba umsebenzi omkhulu impela. Abathengisi abaningi engibaziyo bachitha isikhathi esiningi beqoqa futhi beguqula idatha, bese bekhiqiza ngesandla imibiko abayidingayo ukuyibika emkhankasweni nakwamanye amamethrikhi wokumaketha. I-Funnel: Ukuhlanganiswa nemithombo yedatha engaphezu kwe-500 I-Funnel ithatha idatha engcolile, ethunyelwe kusuka kuyo yonke imithombo ukukhiqiza ngokuzenzakalela idatha ye-Business-Ready evumelaniswe ngokuphelele, esesikhathini, futhi
NgoLwesithathu, Agasti 29, 2012 NgoLwesine, Februwari 25, 2016 Douglas Karr
Njengabakhangisi, sikhungathekile ngemininingwane. Izolo nje bengisungula umbiko wenqubekela phambili we-SEO ongilethe kusuka ekulandeleni amazinga, idatha yeWebmasters, idatha yeGoogle Analytics neHubspot ukufaka amamethrikhi asemqoka nokuvumelanisa ukubika ukuqinisekisa ukuthi kunembile. Izixazululo zeBusiness Intelligence (BI) bezilokhu zikhona esikhaleni seBhizinisi isikhashana futhi bekuvame ukufakwa kwamakhasimende / kweseva ngemijikelezo emide yokuqalisa… kwesinye isikhathi iminyaka. Isixazululo se-BI sizongivumela
NgoMgqibelo, Ephreli 7, 2012 NgoMgqibelo, Ephreli 7, 2012 Douglas Karr
Akungabazeki ukuthi ukuhlaziywa kwedatha kunembuyiselo engakholeki ekutshalweni kwemali… kepha ngaphandle kwamathuluzi adingekayo, izinto zibiza ngokushesha. Kade senza igama eliyisihluthulelo nokuhlaziywa kokuncintisana kwelinye lamakhasimende ethu isikhathi esingaphezu kwamaviki amathathu manje - sihlanganisa ithani ledatha, amagama angukhiye angaphezu kwe-3, futhi sikubeka phambili ngesandla. Kuyabiza lokho futhi sihlala sifuna ithuluzi elilandelayo le-BI ukusisiza ukunciphisa isikhathi nezindleko zalokho kubika. Kusuka ku-infographic:
Amawebhusayithi Angasebenza Imisebenzi Ehleliwe ngeCron
NgoMsombuluko, Januwari 14, 2008 NgoLwesine, Novemba 22, 2012 Douglas Karr
Sinezinhlelo eziningi zokuqapha ezingasasebenzi emsebenzini ezenza izinqubo njalo. Abanye bagijima njalo ngeminithi, abanye kanye ngobusuku kuya ngokuthi benzani. Isibonelo, singaqalisa iskripthi esikhiphela wonke amakhasimende angathenganga ezinsukwini ezingama-30 ukuwathumela isigqebhezana. Esikhundleni sokuzama ukulandelela konke lokhu ngesandla, kulula kakhulu ukwakha imisebenzi ehlelwe ngokuzenzakalela futhi